မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: 08/01/2015 - 09/01/2015
စင်္ကာပူရဲ့ တရုတ် တစ္ဆေကြီးပွဲလ အတွက် ကိုယ်တွေ့စိတ်နယ်လွန် ဖြစ်ရပ်ဆန်းလေးအကြောင်းရေးချင်မိပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေထဲက သရဲကြောက်တတ်တဲ့ သူတွေကို မေးချင်ပါတယ်။
သရဲဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို အကောင်လိုက်ကြီးလို့ထင်သလား?
ဒါမှမဟုတ် သရဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ကို တနည်းနည်းနဲ့ ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့ လက်ခံသလား?
တော်ရုံတန်ရုံ အကျိုးကြောင်းမသင့်ဘူး သိပ္ပံနည်းမကျရင် သိပ်မယုံချင်တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ သရဲတော့ ကြောက်တတ်ပါတယ်။ (အဲ… မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတော့မယ် မနေမဖြစ် နေရတော့မဲ့ အချိန်တွေဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် ကျိုးကြောင်းဖြေသိမ့် အားမွေးပြီး မကြောက်အောင် နေတတ်ပါတယ်။) ကြောက်ဆို ကျွန်မဘဝမှာ သေသေချာချာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒိထဲက တစ်ခုအကြောင်း ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ရေးပေးပါမယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ Genting Highland ဆိုတာ ခေတ်မီကစားကွင်းတွေနဲ့ လောင်းကစားဝိုင်းတွေရှိတဲ့ တောင်ပေါ်နေရာလေးတစ်ခုပါ။ အလည်အပတ်လာရောက်သူတွေလဲ များပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုလဲ ထိုနေရာလေးကို ရာသီဥတုအေးတာကို သဘောကျတာတစ်ကြောင်း ခေတ်မီကစားကွင်းမှာ ရဟတ်ကြီးတွေ၊ ရထားကြီးတွေ စီးရတာကို ကြိုက်တာတစ်ကြောင်း၊ အရင်က စင်္ကာပူမှာ Universal Studio မဖွင့်ခင်က ခဏခဏသွားဖြစ်တဲ့ နေရာလေးပါ။ အဲဒိလို ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သေကြောင်းကြံမှု၊ လောင်းကစားရင်း အဝေမတည့်ခြင်း မကျေနပ်ခြင်းတွေကြောင့် လူသတ်မှုစတာတွေဆိုတာလဲ မဖြစ်ဖူးတဲ့ ဟော်တယ်တောင် ခပ်ရှားရှားနေမယ်ထင်ပါတယ်။ Genting က ဟော်တယ်တွေ သရဲခြောက်တယ်ဆိုတာလဲ အင်တာနက်မှာ “Haunted Genting Hotel” ဘာညာဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက်ရင် ထွက်လာမှာပါပဲ။
ကျွန်မတို့ကတော့ သွားရင် First World Hotel မှာ တည်းလေ့ရှိပါတယ်။ သူက ဈေးလဲချိုတယ်။ ဆိုင်တွေ ကစားကွင်းတွေနဲ့လဲ နီးတယ်လေ။ ဟော်တယ်က အတော်လေးကြီးပြီး တာဝါ ၂ခုရှိပါတယ်။ အဲဒိတုန်းက ကျွန်မတို့ မိသားစုနဲ့အတူ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လဲပါပါတယ်။ ယောက်ျားဆိုလို့ ဖေဖေတစ်ယောက်တည်းပါပါတယ်။ အဲ့ဒိတုန်းက မေမေနဲ့ ဖေဖေက တစ်ခန်း။ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မ ၃ယောက်ခန်းနဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ခန်းက အလယ်မှာ တံခါးပါတဲ့အခန်းပါ။ အလည်က တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ရင် အခန်း ၂ခန်းက ဆက်နေတဲ့ သဘောပါ။ တစ်ဖွဲ့တည်းမို့ ခုလို ဆက်နေတဲ့အခန်းပေးတော့ ကိုယ်တွေက ပိုကြိုက်တာပေါ့။ မအိပ်ခင်အထိ စကားတွေထိုင်ပြောနေလို့ရသလို သူငယ်ချင်း ၂ယောက် ကြောက်မှာစိုးလို့ ညကျတော့လဲ အဲဒိ အလည်တံခါးကို ဖွင့်ပြီး ၂ခန်းဆက်ထားတဲ့သဘောမျိုးအိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ညီအစ်မ ၃ယောက်မှာ ၂ယောက်အိပ်ကတင် ပုတင်းပေါက်ဖက်မှာ ကျွန်မ အစ်မ၂ယောက်အိပ်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက် တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်မှာ ကျွန်မအိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခြေရင်းကတော့ ဟိုဘက်သူငယ်ချင်းတွေအခန်းနဲ့ ဆက်တဲ့ တံခါးပေါက်ပေါ့နော်။
ဒီပုံကတော့ First World Hotel အခန်းတွင်းပုံပါ။ အင်တာနက်ကယူထားတာပါ။ ကျွန်မတို့ရတဲ့ ၂ခန်းဆက်ဆိုရင်တော့ အတွင်းဘက် ကုတင်ခြေရင်းမှာ ဟိုဘက်ခန်းနဲ့ ဆက်တဲ့ တံခါးပေါက်ရှိပါမယ်။
သူငယ်ချင်းတွေဘက်အခန်းကတော့ မီးဖွင့်အိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အခန်းကတော့ ညအိပ်မီးနဲ့ ရေချိုးခန်းရှေ့က မီးကို ဖွင့်ထားတော့ အခန်းတွေက လင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ညဘက်အိပ်ခါနီးရေလေးများ နည်းနည်းသောက်မိရင် မနက်မိုးလင်းခါနီးဆို အပေါ့သွားချင်တာ ပုံမှန်ပါပဲ။ (အဲ့ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဆို အိပ်ခါနီးရေကို သောက်မအိပ်ပါဘူး။)
ခုလဲ မိုးလင်းခါနီး (အချိန်ကိုတော့ ကျွန်မ နာရီမကြည့်မိတော့ မသိပေမဲ့ မိုးလင်းခါနီးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒိအဖြစ်အပျက်ပြီး နောက် ၁နာရီ ၂နာရီလောက်နေတော့ ကျွန်မ အစ်မတွေနိုးပြီး အားလုံး နိုးလာလို့ပါပဲ။) ဒီတော့ ခန့်မှန်းခြေ မနက် ၅နာရီ ၆နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ အပေါ့သွားချင်လို့ နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ့်စိတ်ကပဲကြောက်လို့လား။ ကျွန်မတို့ မသိနိုင်တဲ့ ဆဌမအာရုံကြောင့်ပဲလားတော့မသိ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ အိမ်သာကို ထမသွားရဲသေးလို့ မနည်းကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဖြေ အားပေးနေတဲ့အချိန်။ ကိုယ်အားယူပြီး ထမယ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းဘက် အခန်းကနေ ကျွန်မတို့အခန်းဘက်ကို ဝင်လာပြီး ကျွန်မတို့ အိမ်သာထဲဝင်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဖတ်ကနဲ့ ကျွန်မတွေ့လိုက်ပါတယ်။ (သူက ပုံမှန် လမ်းလျှောက်သွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မသူ့ကို နောက်ကျောပဲမြင်လိုက်ပါတယ်။ ဟိုဘက်ခန်းကနေ အဲဒိ အလယ်တံခါးကို ဖြတ်လာပြီး ကျွန်မတို့ဘက်ခြမ်းက အိမ်သာကို အေးဆေးဝင်သွားတာပါ) အဲဒိအချိန်မှာတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်လဲ အပေါ့သွားချင်လို့ သူတို့အခန်းမှာ မသွားရဲလို့ ကျွန်မတို့ အခန်းဘက်ခြမ်းကူးလာတယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်တောင် ကျွန်မက စကားလှမ်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ ဂိုက်စိုက်က ကျွန်မသူငယ်ချင်း အသည်းကွဲလာတဲ့တစ်ယောက်နဲ့ တူလို့တောင် သူလို့ထင်ပြီး ပြောလိုက်တာပါ။
“အော်… ခိုင်… နင် အိမ်သာသွားမလို့လား။ အေးသွားသွား။ နင်ပြီးမှပဲ ငါသွားတော့မယ်” ။ သူကတော့ ကျွန်မကို ဘာမှ ပြန်မဖြေပါဘူး။
ကျွန်မ စိတ်ထဲမလဲ သရဲကြောက်နေတာ ခုတော့ သူငယ်ချင်းလဲ နိုးနေတယ်ဆိုတော့ သိပ်မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျ ကိုယ်ဝင်ရင် သူလဲ သူ့အိပ်ယာပေါ်မှာ ချက်ချင်းအိပ်ပျော်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အတော်ပဲဆိုတွေးပျော်နေတာ။ (တော်သေးတယ်… ကြောက်ပြီး သူငယ်ချင်းရေ တူတူ အိမ်သာဝင်ရအောင်ဆိုပြီး အတင်းလိုက်မဝင်ဖြစ်လို့။ ခိခိ။)
ဒါပေမဲ့ အိမ်သာဝင်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းက တော်တော်နဲ့ ပြန်ထွက်မလာပါဘူး။ ကျွန်မလဲ သူထွက်အလာကို အိပ်ယာပေါ် လှဲပြီး စောင့်ရင်းစောင့်ရင်း နောက် ၁နာရီ လောက်နေမှ ကျွန်မ အိပ်တစ်ဝက်နိုးတစ်ဝက်လောက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ကျွန်မ အစ်မ သံပတ်မြည်ပြီး သူတို့ ပြင်ဆင်ဖို့ ထတာ ကျွန်မသိလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ အစ်မ မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေချိုးခန်းဘက်သွားတော့ အိမ်သာထဲမှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ထွက်မလာသေးဘူးလို့ သူ့ကို လှမ်းပြော သတိပေးဖို့ နောက်ကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းစွာပဲ ကျွန်မ အစ်မ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ နောက်တော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေ အခန်းဘက်က နိုးလာသံကြားတော့မှ ကျွန်မထပြီး သူတို့အခန်းသွားကြည့်တော့ ၂ယောက်လုံး ခုမှ နိုးလာတဲ့ပုံစံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်မများ သူပြန်ထွက်သွားတာကို မတွေ့လိုက်လို့လားဆိုပြီး စောစောက တွေ့လိုက်တယ်လို ထင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို လှမ်းပြီး “နင်စောစောက ငါတို့အခန်းဘက် အိမ်သာလာတက်သေးလား” လို့မေးတော့။ “မတက်ပါဘူး၊ ခုမှ နိုးလာတာ” လို့ပြောပါတယ်။ သေချာတာက အသည်းကွဲလာတဲ့သူက ကျွန်မကို နောက်ဖို့ စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက အဲလို နောက်တတ်တဲ့ type လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ အပေါ့သွားချင်နေတဲ့အချိန် ကိုယ့်ရှေ့တင် အိမ်သာထဲ လူဝင်သွားတာ မှတ်မှတ်ရရ သေသေချာချာ တွေ့လိုက်လို့ စောင့်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်မ မျက်စိမှားတာ၊ အမှတ်မှားတာ၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆို မနက်က ကျွန်မ တွေ့လိုက်တာ ဘယ်သူလဲ? ခုထက်ထိ ကျွန်မ အဖြေရှာမရသေးပါဘူး။ အိမ်သားတွေက ကျွန်မ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မျက်စိမှားတာဖြစ်မှာပါလို့ ဝိုင်းပြောကြပေမဲ့။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မ စကားလှမ်းပြောလိုက်တာနဲ့ သူပြန်ထွက်လာရင် ကိုယ်ဝင်မယ်ဆိုပြီး စောင့်နေခဲ့တာက ကျွန်မ အိပ်ချင်မူးတူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သက်သေလို့ ထင်တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လဲ အမှန်တကယ်သာ နာနာဘာဝ ဆိုရင်လဲ သူဟာ ကျွန်မကို နာကျင်စေလိုတဲ့ စိတ်မရှိလောက်ဘူးထင်တာပါပဲ။ တမင်တကာပဲ ခြောက်လှန့်ချင်လို့လား။ သူ့ဟာသူ နေနေတာကို ကျွန်မက မတော်တဆတွေ့သွားခဲ့သလားတော့ မသိပါ။ ကျွန်မ သရဲကြောက်တယ်လို့ ပြောလို့ အိမ်ကလူတွေက သရဲတောင် မြင်ဖူးလို့ကြောက်တာလားဆိုရင် “ဟုတ်… အဲ့ဒိတုန်းက မြင်ခဲ့တာ သရဲဆိုရင်တော့ ကျွန်မ သရဲ မြင်ဖူးလိုက်ပါတယ်။” ဒါပေမဲ့ ကြောက်စရာတော့ မကောင်းပါဘူး။ ကြောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဟာကိုယ် အတွေးနယ်ချဲ့မိလို့ ကြောက်တာပါ။ သူကတော့ ကိုယ့်ကို ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ သရဲဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သေသေချာချာ ကျိုးကြောင်းပြတွေးလိုက်ရင်ကျတော့ သရဲဆိုတော့ ကြောက်စရာ မကောင်းတော့ပြန်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကသာ ကိုယ့်ကို ပြန်ခြောက်နေတယ်လို့ ယူဆတာပါပဲ။
Posted by mabaydar at 5:58 PM 11 comments :
Labels: ခရီးသြားမွတ္တမ္း , ျဖစ္ရပ္ဆန္း , ေဗဒါ့အေၾကာင္း
Posted by mabaydar at 2:27 PM 14 comments :